के विवाह गर्दै्छिन् सोनिका रोकाया ? - Enepalese.com
के विवाह गर्दै्छिन् सोनिका रोकाया ?
इनेप्लिज २०७७ जेठ ८ गते ९:५८ मा प्रकाशित
उनी समय समयमा विभिन्न कारणले गर्दा विवादमा पनि पर्दै आएकी छिन् । उनले को सँग र कहिले विहे हुन्छ भन्ने विषयमा केही खुलाइनन् । तर उनका अनुसार उनले आफ्ना फ्यानहरुका लागि यस वर्ष नै शुभ समाचार दिने तयारी रहेको उनले बताइन । उनी निकट स्रोतका अनुसार सोनिका केही समय देखी प्रेममा रहेको र यसै बर्ष उनको लगन गाठो गासिनेमा दुईमत नरहेको स्रोतको दावी छ ।